Na dia eo aza ny fandrahonana amin’ny fisamborana, dia lasa nalaza tao Thailandy ny hira rap mitsikera ny fitondrana miaramila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2018 9:07 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, русский, Français, 繁體中文, English
Ity ampahany tamin'ny lahatsarin-kira ity dia maneho ny herisetra atao amin'ny mpitsikera ny miaramila Thailandey sy ny fifandonana matetika eo amin'ireo mpanohana ny antoko politika. Pikantsary tao amin'ny lahatsary YouTube.
Ny lahatsarin-kira rap mitsikera ny governemanta tantanan'ny miaramila ao Thailandy dia niparitaka na dia nisy aza ny fandrahonana nataon'ireo manampahefana hanadihady ireo mpanakanto ao ambadik'ity hira malaza ity izay nolazain'ny praiminisitra fa “tsy mety” .
Nivoaka tamin'ny 22 Oktobra, nahasarika mpijery YouTube miisa 600.000 tao anatin'ny roa andro monja ilay lahatsarin-kira maharitra dimy minitra “Prathet Ku Mi” (Inona no mahazo ny Fireneko) avy amin'ny tarika “Rap Against Dictatorship” . Tamin'ny fotoana nanoratana dia efa nahatratra 40 tapitrisa ny nijery izany.
Nanoratra niaraka ny hira izay mitsikera ny herisetra ataon'ny fanjakana, ny kolikoly ataon'ny governemanta, ary ny fitondrana miaramila ankehitriny ny tarika ahitana mpiangaly rap miisa 10, izay nisafidy ny tsy hitonona anarana ny sasany tamin'izy ireo.
Nanao fanonganam-panjakana ny tafika notarihan'ny Jeneraly Prayuth Chan-ocha tao Thailandy tamin'ny taona 2014. Nisy lalàm-panorenana vaovao novolavolaina mba hiantohana ny fanohizan'ny miaramila ny fanjakazakana amin'ny fintantanam-panjakana na dia efa niverina tamin'ny laoniny aza ny fitondrana sivily. Nanambara i Prayuth fa hotanterahana amin'ny herintaona ny fifidianana, kanefa nametraka fameperana maro amin'ny fampielezan-kevitra politika ny governemanta.
Noderaina noho ny herim-pony sy ny famoronany tamin'ny fampisehoana ny toe-draharaha tao amin'ny firenena ilay tarika rap. Ireto ambany ireto ny pikantsary tamin'ny ampahany sasany tamin'ny lahatsarin-kira:
Manondro ny lalam-panorenana 2016 izay noheverina fa hanamora ny fiovan'ny fireneny mankany amin'ny demokrasia, saingy nanamafy fotsiny ny fanjakazakan'ny miaramila izany. Pikantsary tao amin'ny lahatsary YouTube.
Ity ampahany amin'ny lahatsarin-kira ity dia manondro ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014 sy ny fitondrana jadona miaramila ao Thailandy. Pikantsary tao amin'ny lahatsary YouTube.
Ny praiminisitra Prayuth no lehiben'ny tafika izay nitarika ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014. Pikantsary tao amin'ny lahatsary YouTube
Manasongadina vondron'olona izay toa mihirahira amin'ny fanohanana ny sary. Nambara any amin'ny faran'ny lahatsary fa manondro ireo vahoaka sy ny tafika miaramila izay nanafika sy namono mpianatra am-polony tao amin'ny Oniversite Thammasat izay nanao hetsi-panoherana manohitra ny fitondrana miaramila tamin'ny taona 1976 izany raha ny tena izy .
Namerina indray ny iray tamin'ireo herisetra nitranga tamin'ny famonoana tao amin'ny Oniversite Thammasat tamin'ny taona 1976 ilay lahatsarin-kira. Pikantsary tao amin'ny lahatsary YouTube
Raha nanontaniana momba ny fanapahan-kevitra ny hampiditra ato amin'ity lahatsary ity ny famonoana olona feno herisetra izay nahantona tamin'ny hazo tao amin'ny Oniversiten'i Thammasat, sy ny hoe mety ho fanomezam-boninahitra ny herisetra ve izany, dia nanazava tao anatin'ny antsafa tamin'ny tranonkala Prachatai ny tale Teerawat Rujintham hoe :
Indraindray dia ilaina ny mampiseho herisetra amin'ny fomba tsotra, mba hahatsapan'ny olona sy hahitany ny fahamarinana sasantsasany.
Tsy mahomby ny fiarahamonina miaina anaty tahotra sy ny fanivanan-tena. Manana risim-po hiady sy hijoro amin'izany isika raha mino zavatra iray.
Nanakiana ilay hira ho “tsy fanajana” ny firenena ireo manampahefana notarihin'i Prayut ary nandrahona ny hanadihady ity tarika rap ity ireo lehiben'ny polisy sy hitory ireo izay mampiroborobo ny hira ao amin'ny tambajotra sosialy. Hatreto, tsy mbola nisy ny fisamborana.
Namorona ny hirany rap manokana kosa ny governemanta etsy andanin'izany izay mankalaza ny fanavaozana sy ny fandrosoana, saingy tsy nahomby tao amin'ny tambajotra sosialy izany.
Azo inoana fa nahatsapa ny lazan'ilay hira teo amin'ny tanora ny governemanta Prayut ary mitandrina tsara mba tsy hanaitra ny fihetseham-pon'ny vahoaka amin'ny fotoana itadiavany ny fanohanana avy amin'ny mpifidy.
Eny tokoa, mpisera Thailandey maro sy mpitarika antoko politika samihafa no naneho ny fanohanany ireo mpiangaly rap:
Milaza foana aho fa hery manan-danja hanosehana ny fiarahamonina mankany amin'ny hoavy mandroso ny fahefana malefaka toy ny mozika sy ny literatiora. Nanao asa goavana niaraka tamin'ny #ประเทศกูมี ny Rap Against Dictatorship (Ny mozika rap manohitra ny didy jadona). Mampiseho an'izao tontolo izao izy ireo fa tsy milefitra amin'ny fitondrana Junta izahay Thailandey .
Namaly ireo mpitsikera izay nanendrikendrika azy ireo ho nandoto ny endrik'i Thailandy manerantany tao anatin'ny antsafa niarahana tamin'ny tranonkalam-baovao Coconuts ny “Rap Against Dictatorship” :
Ho an'ireo olona milaza fa ‘manimba ny lazan'i Thailandy’ izahay, dia manontany aho hoe inona no ratsy kokoa: manodinkodina ny maso jamba amin'ny olana izay efa fantatry ny olon-drehetra sa mahafantatra ny olantsika ary manomboka ny resadresaka mba hitady vahaolana?
Jereo ny lahatsary feno amin'ny ‘Prathet Ku Mi’